Iimpawu Power-Supply - China BST (Hongkong) Industrial
Ugcino lwamandla Supply
PFC Quad Isiphumo
Isiphumo PFC Single
PFC Triple Isiphumo
450W Isiphumo Single Ukutshintshela Power Supply IRS-450w
125W Quad Isiphumo Ukutshintshela Power Supply ITQ-125W
75W Isiphumo Dual Ukutshintshela Power Supply IRD-75W
50W Isiphumo Triple Ukutshintshela Power Supply ITT-50W
Kukho iimpawu igunya-ubonelelo eziliqela ezichaphazela umsebenzi wabo:
Siqhele: I Umahluko dc imveliso ombane njengomsebenzi ixesha ombane rhoqo umgca, umthwalo, kunye lobushushu voice.
Impendulo Dynamic: A unikezelo amandla esinokusetyenziselwa kwinkqubo apho kukho imfuneko ukuze ukunika impendulo ekhawulezayo tshintshayo kutshintsho ngamandla umthwalo. Oko kube njalo kuba umthwalo microprocessors-high speed kunye nemisebenzi ngamandla nolawulo. Kulo mzekelo, yavulel inokuba ukwimeko yokulinda phezu komyalelo kufuneka uqale phezulu okanye ukucima nangoko, leyo umisela kwemisinga eliguqukayo ophezulu kunye rates kwiziphambuka ngokukhawuleza kwi umbane. Ukulungiselela yavulel, ombane output unikezelo kufuneka kummango phezulu okanye ezantsi ngexesha lekhefu elikhankanyiweyo, kodwa ngaphandle overshoot ngokugqithiseleyo.
Bongeka: Ukuhambelana output-to-igalelo amandla (e pesenti), ilinganiswa kwindawo yangoku umthwalo inikezwe kunye neemeko umgca wesiqhelo (nokuzenza / Pin).
Ixesha Holdup: Ixesha apho ombane imveliso unikezelo amandla kaThixo uhlala ngaphakathi iinkcukacha elandela ukulahleka kwamandla igalelo.
Inrush yangoku: Peak lwephanyazo Igalelo yangoku ukutsalwa unikezelo amandla turn-on.
Imigangatho International: Cacisa iimfuno unikezelo amandla kaThixo ukhuseleko kunye EMI (ukuphazamiseka magnetic) kumanqanaba avumelekile.
Yodwa: ukwahlukana Electrical phakathi igalelo kunye zikhutshwa unikezelo lwamandla ulinganiswa volts. A non-ekwanti na indlela dc phakathi igalelo kunye neziphumo bonikezelo, kanti kukho umbane ekwanti usebenzisa transformer ukuphelisa indlela dc phakathi igalelo nemveliso.
Ulawulo Line: Utshintsho kwexabiso dc imveliso ombane obangelwe utshintsho ombane ac igalelo, acaciswe njengoko utshintsho ± MV okanye ±%.
Ulawulo umthwalo: Utshintsho kwexabiso dc imveliso ombane obangelwe utshintsho umthwalo ukusuka evulekileyo-ejikeleza eliphezulu-rated imveliso ngoku, acaciswe njengoko utshintsho ± MV okanye ±%.
Isiphumo ingxolo: Oku kwenzeka unikezelo lwamandla ngokohlobo Ungqabhuko elifutshane amandla aqhelelkileyo. Ingxolo kubangelwa ezibiza kunye nokuphatha of capacitances olwaye lwamfimfitha ngaphakathi umbane ngethuba kumjikelo zokusebenza. Awo Its iyaguquguquka kwaye ixhomekeka ukuvimba umthwalo, ukuhluza yangaphandle, nendlela oko womlinganiselo.
Ngombala Isiphumo ombane: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
Ngamaxesha athile random ukutenxa (PARD): okungafunwa ngamaxesha athile (yama-) okanye aperiodic (ingxolo) ukwahluka amandla-unikezelo output ombane ukusuka ixabiso baso besiqhelo. PARD luboniswa MV Umgama wenkcochoyi-ukuya-kwincopho okanye RMS, kwi bandwidth emiselweyo.
Incopho yangoku: I yangoku liphezulu ukuba unikezelo lwamandla unganikeza ixesha elifutshane.
Amandla Peak: The amandla imveliso ngokupheleleyo ukuba unikezelo lwamandla ukuvelisa ngaphandle umonakalo. Kuyinto kwaqondwa kakuhle ngaphaya amandla gqolo amandla output oluthembakeleyo kwaye kufuneka isetyenziswe kuphela ngamaxesha athile.
Power-supply kulandelelwano: ezilandelanayo turn-on and off yokuba izinto zombane kufuneka kwiinkqubo kunye yombane ezininzi zokusebenza. Oko kukuthi, yombane kufuneka isetyenziswe ngolandelelwano esithile, kungenjalo kwisistim yonakele. Ngokomzekelo, emva kokuba nokusebenzisa ombane yokuqala yaye ifikelela ixabiso ethile, zinamandla yesibini unako ramped phezulu, njalo-njalo. Ukulandelelanisa isebenza in reverse xa ngamandla isusiwe, nangona isantya Kudla ngokungabikho kangangoko ingxaki njengoko turn-on.
Isilawuli on / off: Oku kukhethwe itshintshela ukuba izinto amandla vula iphinde ivale. Power-supply iinkcukacha data-sheet ngokuqhelekileyo iinkcukacha parameters dc ye ekude on / off, ukuhlela ngomhla nangaphandle kumanqanaba logic efunekayo.
Ingqiqo Isilawuli: A unikezelo lwamandla eqhelekileyo ijonga ombane yayo imveliso kwaye owalusa inxalenye emva unikezelo ukunika kumgaqo ombane. Ngale ndlela, ukuba imveliso lidla ukuba ukuvuka okanye awe, impendulo olawula ombane output ubonelelo ngayo. Noko ke, ukugcina imveliso njalo umthwalo, umbane okunene esweni ombane kule umthwalo. Kodwa, uqhagamshelo ukusuka imveliso unikezelo lwamandla ukuba umthwalo yayo bokuxhathisa kwaye ngoku ayahamba kwabo uvelisa idrophu ombane eyenza umahluko ombane phakathi kwee-output unikezelo kunye umthwalo womsebenzisi. Kuba ummiselo ezikumgangatho ophakamileyo, ombane akukanikwa ngxelo ngazo umbane kufuneka ibe ombane kanye umthwalo. Ezimbini (plus kwaye thabatha) unxibelelwano ingqiqo kude Unikezelo ngayo iliso ombane kanye umthwalo, inxalenye yayo ngoko akukanikwa ngxelo ngazo ubonelelo nge xhoba ombane encinane kakhulu kuba ngoku ngokusebenzisa unxulumano ezimbini ingqiqo ekude luphantsi kakhulu. Ngenxa yoko, le ombane isicelo ukuya umthwalo kulawulwa.
Ripples: ekulungiseni nokuyicoca iziphumo imveliso a utshintshe nje amandla unikezelo komnye candelo ac (yama-) ukuba ekhwela kwi yayo dc. Frequency Ripples yi ezininzi ethile iyingxam rhoqo wayicima converter, nto leyo kuxhomekeka Converter yethopholoji efanayo. Ripples alichaphazeleki noko ngayo umbane, kodwa inokuncitshiswa capacitor okuhlaba lwangaphandle.
Ukulandelela: Xa usebenzisa izinto amandla output ezininzi apho iziphumo enye okanye ngaphezulu landela elinye kunye neenguqu emgceni, umthwalo, kunye nobushushu, ukuze ngamnye ugcina ombane efanayo imveliso umlinganiselo, ngaphakathi yokulandela elikhankanyiweyo unyamezelwano, ngokumalunga ixabiso eqhelekileyo.
ixesha Post: Apr-23-2018
Unit 406, Jinhui Building, Chenjiang Middle Street, Zhongkai Hi-zobugcisa Zone, Huizhou City, Guangdong kwiPhondo, China.